10 Kwakanakisa Kubvira Zororo MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Kwakanakisa Kubvira Zororo MuEurope
Nzvimbo dzekare, yemizambiringa, mukare nharaunda, ndezvimwe zvinhu zvishoma zvinoita kuti Europe ive yakanakira zororo rekudonha. Guta rega rega reEurope rine runako, asi mafambiro ari patiri 10 zororo rakanaka rekudonha mumazita eEurope ari mashoma ezvakanyanya nzvimbo yakanaka.
Europe inonyanya kushamisa mukudonha apo miti nemakomo zvakapenderwa muorenji rakajeka, tsvuku, uye yero. Mukupera kwaGumiguru, kune mashoma mashoma mumigwagwa, uye izvi zvinoreva kuti iwe unosvika pakuva nemaonero akanaka ekudonha ese kwauri. Kudonha inguva huru yekufamba nekuti hotera nemitengo yekufamba inodonha zvakanyanya.
Zviri nyore uye zvakasununguka kufamba kuenda kune ese anoshamisa mavara pane yedu zvinyorwa nechitima. Kubva kuLoire mupata muFrance kuenda kuLuxembourg, kufamba kwechitima kwakakwana kuronga kusingakanganwiki kudonha zororo muEurope iwe wanga uchifambidzana nanhasi.
1. Kudonha Zororo Mu Umbria, Itari
Nepo vazhinji vanosarudza Tuscany yezororo rekudonha muEurope, iyo Umbria mudunhu muItaly inonyanya kushamisa uye imwe yemakanakisa ekuwa mafambiro ekuenda kuEurope neItari.
Zvinowanikwa nyore nechitima kubva kuRoma, Umbria inopa vashoma mashoma uye mutengo unodhura wekugara muItari. Mukupera kwaGunyana kusvika Gumiguru, you can enjoy the white truffle and new wine festival in towns like Gubbio. wo, iwe unogona kuenda kuPerugia kumutambo wepagore weEurochocolate. saka, Umbria ndeye nezve kuputira iwe mune iyo huru nzvimbo, kunakirwa nezvakanyanya chikafu newaini panguva yako yekudonha yezororo muEurope. Munguva yerwendo pfupi kana refu, unogara munzvimbo yepadenga-senge nzvimbo, mune imwe yakanakisa nzvimbo yekudonha nzvimbo muEurope.
Florence kuenda kuOrvieto matiketi
Siena kusvika Orvieto matikiti
Arezzo kune Orvieto matikiti
Perugia kuenda kuOrvieto matikiti
2. Cinque Terre, Itari
Iwo mapikicha epamhepo haaite mutongo kune mashiripiti Cinque Terre nharaunda muItari. Dzimba dzinoyevedza dziri kumusoro kwemakomo, yakakomberedzwa neminda yemizambiringa, maresitorendi emuno, uye Hiking mudungwe munzira, vese vanoita dunhu iri inoshamisa yekudonha kwekufamba kuenda kuEurope. Cinque Terre zvechokwadi ine 8 misha midiki nechitima chechitima chinobatanidza vese kune mumwe nemumwe. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kushanyira yega yega misha yekumo 2-3 mazuva kana iwe uri mupfupi nenguva. Chii chinogona kuve chiri nani pane kurovedza hopping mune imwe yenzvimbo dzakanaka muEurope mukudonha?
Cinque Terre inowanzo kupisa muzhizha kwekuenda kumabhichi uye nemvura yepristine. zvisinei, zviri nani zvikuru kushanyira kuwa, nekuti migwagwa yakatetepa haina kana chinhu kubva kune vashanyi. saka, nepo maresitoreti mazhinji akavharwa, iwe waigona kuwana bara rakavhurika rakatarisana negungwa uye unonakidzwa nemaonero mukugadzikana.
Unogona kushandisa 4 mazuva ekuongorora misha uye anogara vhiki refu muLa Spezia guta, yako yekutanga nzvimbo yekufamba kwechitima muCinque Terre. Kubva kuLa Spezia, iwe unodzidzisa kuenda kune chero chero musha wekusarudza kwako.
La Spezia kune Manarola matikiti
Riomaggiore to Manarola matikiti
Sarzana kuManarola matikiti
Levanto kuManarola matikiti
3. Lake Lugano, Siwizarendi
Sparkling turquoise mvura, dzimba dzeruvara rweTacacotta, Nyanza yeLugano muSwitzerland ndeimwe yepamusoro yekushanya kwekushanyira nzvimbo dzako muEurope. Switzerland ine nzvimbo dzakawanda dzinotyisa dzeiyo isingakanganwiki yekudonha zororo muEurope uye Lugano ndeimwe yemabwe eSwitzerland jewelry.
Tembiricha yacho ichiri kudziyirwa pakati paOctober, saka unogona kugara pedyo nedziva negirazi rewaini kubva muminda yemizambiringa yakatenderedza kana kuravira polenta kitosi mumhemberero yechando yechando. Kana iwe uchida kuwedzera kuwedzera kufara uye kushambadzira kune yako yekudonha kuzororo muEurope, you can hike up Monte Bre. Iwo maonero kubva pamusoro peimwe yemafungiro anotyisa aLugano Bay.
Iyo Old Town yeLugano ine mavara emataundi emataundi, 10 makwere, uye yakasarudzika yemigwagwa yekutengesa Via Nessa. Pfungwa iripo, Lake Lugano rakakwana kune vese zvakasikwa-zvine rudo uye hwakanaka hupenyu-hwehupenyu vafambi. Nyanza yeLugano inotyisa yekuzorora kupfupi kwevhiki kana yezororo rakawedzera muEurope.
Iwe unogona kuenda nyore nyore kuLugano lake nechitima kubva kuMilan Central mune imwe inopfuura awa. Zvitima zvinobva paawa imwe neimwe kubva kuMilan chitima chechitima.
Yakabatanidzwa kune Zurich matikiti
Lucerne kuenda kuZurich matikiti
Lugano to Zurich matikiti
Geneva kuenda kuZurich matiketi
4. Fall Zororo MuHannover, Jerimani
Hannover ndiro guta rakadzika midzi muGermany, asi imwe yemhando dzakanakisa dzekuzorora kwekuzorora muEurope. Iri guta rakakura ndimusha mupaki rakakura, kaviri kukura kweCentral Park muNew York. Ancient oak trees and a dziva rakanaka vari pamapaki epaki, yakanakira mitsetse uye ane usimbe masikati machena.
Iyo Marktplatz Old Town uye wachi shongwe ndiyo yakanaka nzvimbo yekutanga yekuwana Gothic dhizaini. Unogona kuenderera kune inoyevedza New Town Hall, chivakwa chikuru-chakaita seimba yakatarisana negungwa. Nyika dzakasvibira nemiti zvakatenderedza imba huru uye vanopedzisa mamiriro ekunze uye kuona mune endarama mavara.
Hannover ndeimwe yematombo eGerman uye haigone kuve tsvarakadenga mukudonha. Kana iwe uri kuronga zororo rekudonha kuenda kuEurope, ipapo Hannover ndiyo yakakodzera yekufamba kuenda. Havasi vashanyi vakawanda vatenderi vakawana mashiripiti ayo, saka, iwe unogona kuve wekutanga kuve nenguva yehupenyu hwako muguta.
Bremen kuenda kuAmsterdam matikiti
Hannover kuenda kuAmsterdam matikiti
Bielefeld kuenda kuAmsterdam matikiti
Hamburg to Amsterdam matikiti
5. Iyo yeBavaria Alps Uye Iyo Dondo Dema, Jerimani
Sango Dema neBavaria Alps sarudzo yakakurumbira yekuzorora kwemhuri kuzororo muEurope. Iyi nharaunda inoshamisa yeGermany ndeimwe yakanakisa yekudonha kwekushanyira nzvimbo kuGermany.
Paunoburuka muchitima mune imwe yemamisha inoyevedza, iwe unonzwa nekukasira kuti wakwira wakananga kuHama Grimm nyaya. Nyanza dzinoshamisa, iyo Triberg nzizi dzemvura, mipata yakasvibira, uye minda yemizambiringa inovimbisa kusingakanganwiki kudonha kwezororo muEurope.
Mashizha anoshandura mavara kuva matani egoridhe, nepo kumashure kune makomo-akakwiridzwa echando. Kuzorora mukabati rematanda mushure mekufamba kukuru muAlps chiitiko chisingakanganwiki. Iwe unogona zvakare kushanyira imwe ye 25 nhare munzvimbo uye Neuschwanstein castle inoshamisa nhare yokuongorora pane yako zororo zororo muEurope.
Offenburg kune Freiburg matiketi
Stuttgart to Freiburg matiketi
Leipzig kune Freiburg matiketi
Nuremberg to Freiburg matiketi
6. Fall Zororo Mu Ahornboden, Ositiriya
Rissbachtal Valley uye Karwendel Alpine Park, inzvimbo inoshamisa yekufamba muAustria yezhizha yezororo. Nzvimbo yeAlpine yeAhornboden ine 2,000 zera Sycamore-Maple miti inotarisa inopenya mukupfeka kwavo kweruva yegoridhe neorenji. Zvisikwa nemakomo zvinogadzira zvakanakisa nzvimbo yekukanganwa kwekudonha kwekuenda kuenda kuEurope.
Iyi nharaunda muTirol inokurudzirwa zvakanyanya kune vafambi vemakomo uye vane ruzivo vanofamba. The national Park ine makomo mazhinji akanaka uye nzira pakati pemakomo amabwe ematombo kuzororo risingakanganwiki muEurope.
Salworth yakangoita 3 maawa kubva kuAhornboden nechitima, kusanganisira kuiswa. Pamusoro pe, kune makuru mahotera anoenderana uye pekugara sarudzo muGrosser Ahornboden panguva yekupera-mwaka.
7. Kudonha Zororo MuRoire Valley, Furanzi
Tiye Loire Valley iri munzvimbo yewaini yeFrance. Izvi zvinoreva kuti 185,000 maeka emizambiringa akavhenekera goridhe pakupera kwaGumiguru. Naizvozvo ndeimwe yenzvimbo dzakanaka kwazvo dzekushanyira muEurope uye inonakidza yekudonha zororo rekuenda.
Nepo vazhinji vachitora a rwendo rwezuva - kubva kuParis, inokurudzirwa kwazvo kuti ugare vhiki refu muLoire Valley kuti ukoshe zvizere mashiripiti ayo uye runako. Nenzira iyi, unogona kushanyira imwe kana maviri emakuru anoshamisa emupata, saChateau de Chambord. Vamwe vanoti chivakwa ichi chinoshamisa chakagadzirwa naDe Vinci pachake.
The Chambord castle ndizvo 2 hours south of Paris and you can train travel from Paris Austerlitz to Blois-Chambord. Within an hour and a half, unenge uchidzungaira pamuzinda wakanaka.
Paris kuenda kuStrasbourg matiketi
Luxembourg kune Strasbourg matiketi
Nancy kuenda kuStrasbourg matiketi
Basel kuenda kuStrasbourg matiketi
8. Bordeaux, Furanzi
Hapana kana chinodakadza uye chine rudo kupfuura France mukudonha. Bordeaux iguta rakasarudzika reFrance uye kumusha kune mizinda yemizambiringa yeSalt-Emilion uye nemahombekombe eArcachon, izvi 2 nzvimbo dzinongova zvishoma zvezvikonzero izvo zvichaita kuti iwe ude murudo naNouvelle Aquitaine muBordeaux. dzoushe, kushanya kwewaini, spa kurapwa, uye zvidzidzo zvekubika, gadzira Bordeaux nzvimbo yakajeka yekufamba yekuenda kwako kuzororo rekuzorora.
Mukupera kwaOctober vazhinji vashanyi vanodzokera kumba, saka mitengo yekufambisa uye yekugara inodonha muBordeaux. Panguva ino minda yemizambiringa inotanga kukohwewa mazambiringa uye iwe unogona kugara mune imwe yematetix mazhinji munharaunda uye kupininda mukati. Izvi zvichawedzera kuwedzera a rakasiyana ruzivo kuenda kuzororo rako remufananidzo.
Dunhu rakanakira kusvika nechitima kubva chero kuFrance, uye pane zvakananga soro-nokukurumidza nezvitima kubva kuParis-Austerlitz neMontparnasse zviteshi zvechitima.
La Rochelle kuenda kuNantes matikiti
Toulouse kuenda kuLa Rochelle matikiti
Bordeaux kuenda kuLa Rochelle matikiti
Paris kuenda kuLa Rochelle matikiti
9. Kupunzika Kwezororo MuParis, Furanzi
Yedu yakanakisa kuzororo zororo muEurope rondedzero haizove yakazara pasina Paris. Paris inogara iri pfungwa yakanaka, asi inonyanya kufadza mukudonha. Luxembourg Gardens, zvidiki diki zveFrance, uye rarama mimhanzi mimhanzi gadzira mamiriro akakwana ezororo risingakanganwiki muEurope.
Sipisa chokoreti inopisa kana tarisa iyo Montmarte mazambiringa kukohwa mabiko, Paris ine nzvimbo zhinji dzakanaka dzekupfura iwo mifananidzo inoshamisa. Iwo akanyanya mafichagenji ndiJardins du Luxembourg, Parc Monceau, uye Tuileries Bindu. Kubva pakupera kwaGumiguru, kune yemwaka wepagore festival kumakosi akasiyana siyana mukati meguta remimhanzi, kutamba, nemitambo yemhanzi. saka, kana kuchinaya kana kuti kune zuva, Paris inopa zvinhu zvakawanda zvakanaka zvekuita.
Paris haina vanhu vakawanda uye mitengo yekufambisa inonyatsotengwa kure-mwaka, saka chitima chekufamba uye kwekugara chinoita kuti Paris kuve kwakanyanya kudonha kwekufamba kwekuenda kuzororo reEuropean.
10. Amsterdam, Netharenzi
Mumwaka wechirimo, iyo tulips inoshongedza minda yeAmsterdam nemapaki, asi mukuwa, orenji, yero uye tsvuku mashizha mavara iwo marangi nemigwagwa. Amsterdam runako rwese uye nekudaro ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudonha muEurope. Iwe unogona kufamba kuburikidza neAmsterdam mune chete 3 mazuva, asi iwe uchada kugara kwenguva refu uye kumira pamakona ese kuti utendise iwo iwo maficha akanaka.
Amsterdam iguta rinoshamisa rezororo muEurope, ne 50 mamuseum muguta, chikepe Vatasvi mumakomba, pane zvakawanda zvezvakanaka zvinhu zvekuita mune iyi inoshamisa yekuwa yekufamba kuenda kuNetherlands. pamusoro pe, kune mapaki anoshamisa kwaunogona kuva nepikiniki kana bhasikoro kutenderera kana mamiriro ekunze akanaka.
Amsterdam rimwe remaguta akanakisa muEurope, inowanikwa nechitima kubva kwese kupi kune nyika dzepedyo, uye nyore nyore kufamba mukati meguta.
Brussels kuenda kuAmsterdam matikiti
London kuenda kuAmsterdam matikiti
Berlin kuenda kuAmsterdam matikiti
Paris kuenda kuAmsterdam matikiti
bhonasi: Fall Zororo MuLuxembourg
Bherujiyamu, Furanzi, uye Germany inokomberedza nyika diki yeLuxembourg, iyo yakakwana yekuwa yekufamba kuenda kuEurope. Guta reLuxembourg rinozivikanwa seKarenda Ravo, iri pamawere uye yakakomberedzwa nenhare yemberi. Kuvakwa kwayo kunoshamisa uye yekare-nyika runako vakawana iyo zita re UNESCO nhaka nyika nzvimbo. Grand Ducal Palace uye Adolph bhiriji inofanirwa-inoona mavara pazororo rako kuenda kuLuxembourg.
Magadheni uye akawanda maonero anoona anotyisa anotyisa eguta rose uye rakatenderedza. mukudonha maonero iwo akanyanya kunaka mumavara eumumvuri. saka, neLuxembourg riri guta diki kwazvo muEurope, inomira nekuzvikudza padyo nemaguta makuru epasi rose seParis. Izvo zvakafanira kusarudza Luxembourg kuzororo rako muEurope mukudonha.
Kutenda kune epamberi njanji masevhisi, unogona kuenda chero kuEurope pasina nguva. Kubva kuguta rakakura cosmopolitan kune guta diki uye rinoshamisa, guta roga roga pane redu 10 maguta akanakisa kwezororo rekudonha muEurope, has its unique charm and magic.
Antwerp kuenda kuLuxembourg matiketi
Brussels kune Luxembourg matiketi
Metz kuenda kuLuxembourg matiketi
Paris kuenda kuLuxembourg matiketi
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvechitima matiketi kune chero ehla dzakanaka kuenda pane yedu runyorwa.
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Kwakanakisa Kubvira Zororo MuEurope” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-fall-vacations-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)